Ingabe i-Twitter ifile？刺蛇茶.
Uma ubloga，umakethi noma ebhizinisini，i-Twitter kufanele ibe yingxenye yomkhankaso wakho wokuxhumana nabezindaba。 Kubalulekile ukuba kuTweet ukwandisa ukuqaphela komkhiqizo，ukwakha ubuhlobo，futhi kuyithuluzi elinamandla lokushintsha.
Hlola Imithetho ebalulekile ye-10 yokuthengisa okuphumelelayo kwe-推特.
Yize i-Twitter inikeza ukuhlaziya kwayo kuwo wonke umuntu，abaningi abayisebenzisi ngokugcwele。 Ngaphandle kokuncipha，nazi-izinto eziyisisekelo ongazithola nge-akhawunti ye-Twitter kanye neminye imiyalezo efihliwe.
2.3 Ukuthunyelwa kokuthunyelwe（马哈哈拉）
3 I-3。 Qalisa idatha ye-Twitter使用benzisa i-Excel
4 I-4。 Siyini Isikolo Sakho SE-推特?
Maphakathi no-2014，i-Twitter ivule indawo yayo yokuhlaziya bonke abasebenzisi。 Wonke umuntu onokuphatha nge-Twitter angakwazi ukufinyelela ngokugcwele emayini yegolide.
Kunolwazi oluningi ongaluthola kudeshibhodi，njengokubuka，izenka lokuzibandakanya，ukuchofoza kwezixhumanisi，njll Kodwa，ngaphambi kwalokho，udinga ukuqonda incazelo yemetrikhi ngayineno ukwenza idatha ye.
Uma umkhankaso wakho-Twitter ukwandisa okuvelayo，kufanele ubheke leyo公制ethile futhi uthole indlela engcono kakhulu yokuthuthukisa okuvelayo。 Bheka iso metric ngayinye bese uqhathanisa imininingwane nezinyanga ezedlule。 Uyokwazi uma wenza izinto kahle ngoba uzobona ukwanda okuqhubekayo.
Manje，hlolisisa imininingwane yosuku ngalunye，uzothola imilayezo efihliwe.
Uma ibhizinisi lakho ligxile kule sixhumanisi，yenza A / B ukuhlolwa phezu kwakho。 Gada amamethrikhi abalulekile ngokubhala izihloko ezihlukile，faka i-hashtag ehlukile noma isithombe esihlukile futhi uthole indlela engcono kakhulu yokwandisa ukufinyelela kwe-tweet.
Phakathi no March，2015年I-Twitter iqalise ikhasi eliyisiqalo le-akhawunti。 Leli khasi likulondoloza isikhathi esiningi ngokukunikeza isifinyezo senyanga somsebenzi wakho我们-Twitter.
Uma i-Twitter分析iyingxenye yolwazi olwedlule，阿克·西库扎姆·纳穆拉。 Gxila ku-metric futhi uthuthuke lapho。昆古姆·乌瑟莱拉·奥古莱·恩古库姆巴.
Ngo-i-2015年5月27日，i-Twitter ithuthukise ukuhlaziywa kwayo Abalaleli Ukuqonda。 Lesi sici sinokuqhekeka okuningana kwemininingwane yokuthakaselwa kwabalandeli bakho okufana ne-Demographics，Indlela Yokuphila，I-Mobile Footprint，njll.
Lokhu kuhle ebhizinisini，ngoba manje uyakwazi ukuqhathanisa abalandeli be-organic nabasebenzisi be-Twitter。 Okwamanje，abasebenzisi基地-美国kuphela abalandelwayo。 Ungenza isifundo sokuqhathanisa phakathi kwabalandeli bakho nabanye abasebenzisi be-Twitter.
I-Audience Insights isiza amabhizinisi athuthukise amasu awo ku-推特.
Kuningi amathuluzi wokuphatha abezindaba etholakalayo emakethe njengeBuffapp，Hootsuite，Ritetag，Klout，njll Kunamanye okugxila ku-Twitter kuphela njenge-Tweetdeck，i-Managefilter ne-SocialBro.
Wonke Amathuluzi Asebenza Ngenjongo eyodwa-乌克兰Impilo yakho ibe lula.
Isikhathi esiningi，ithuluzi linikeza ulwazi olujulile ekusebenzeni kwakho kwe-Twitter。 Ihluke kulokho okutholayo kusuka kwesikhulumi se-Twitter sokuhlaziya.
纳粹阿马普拉蒂佛母（We-3）engathola ukuthi kufanelekile futhi kulula kubaqalayo ukusebenzisa.
Ukusebenzisa i-buffer，uyakwazi ukuhlaziya izibalo ze-tweet ngayinye。 I-Buffer izobeka i-tweet yakho engaba yi-顶级Tweet。 Ungathatha isinyathelo esisheshayo kuwo wonke ama-tweet owodwa ukuze uphinde uhlaziye noma ubhale kabusha ukuze uthuthukise.
Nge-akhawunti yamahhala，unokufinyelela okukhawulelwe kwimininingwane yokuhlaziya yeBuffer。 Uzodinga ukuthuthukisa ku-akhawunti ekhokhelwayo ukuze ujabulele ukuhlaziywa okunemininingwane耶达塔yakho.
I-Ritetag iyithuluzi lokuxhumana nabantu eligxile ku-hashtag。 Iza nokufakwa kombala我们标签，ukuhlaziywa kokubandakanya okusheshayo nokuhlolwa okuphelele kokuthunyelwe。 I-Ritetag ihlaziya i-hashtag njalo，evumela ukuthi ukwandise ukufinyelela kwakho ngaphambi kokuthumela i-tweet.
Izibonelo zesibonelo #hrowthhacking标签ku-Twitter.
Ukuthuma（eyaziwa ngokuthi i-Tweetchup）iyithuluzi lokuhlaziya lamahhala le-Twitter。 Ihlaziya ukuthi i-tweet ishiwo kaningi kangakanani futhi ibuyiswa emuva ngabalandeli bakho.
Ikunikeza ukuhlaziywa ukuthi i-Twitter yakho isetshenziswa kanjani。 Uzothola ukuthi yibaphi abasebenzisi abakutshela kakhulu。 Futhi，Kukhona uhlu lwezibalo eziphathelene nama-tweets akho kanye ne-IMP.
Ngaphandle kwalokho，i-Postchup ikunika indawo ye-geo-indawo yabantu abakutshele。 Kusuka lapho，ungaba nokubuka okuphelele kwezindawo zakho zezilaleli.
Nakuba ukuhlaziya Kwe-推特kunolwazi olunjalo，i-Postchup inikeza ukuhlaziywa ngendlela ekhangayo elula ukuyiqonda.
Uma usalanda在Twitter上发布了kusuka kwipulatifomu yase-Twitter，nginincoma kakhulu ukuthi uzame amathuluzi ambalwa。 Ulahlekelwa okuningi kwedatha ebalulekile.
Uma ungaqiniseki ukuthi ngizoqala ngaphi，zama lokho engihlanganyele ngenhla。 Onke amathuluzi alula ukuwasebenzisa futhi enza umsebenzi wakho我们-推特ube lula.
I-3。 Qalisa idatha ye-Twitter使用benzisa i-Excel
Ngaphandle kwedatha ye-分析oyithola ku-platform ye-Twitter yomphakathi kanye namathuluzi wezokuxhumana，ungahlala uhlaziya ngokwakho.
Ngokuvamile，labo abathanda ukwenza izinto ngokwabo bazokwazi ukuqonda kangcono le datha。 Lokhu akuwona umsebenzi onzima。 Udinga nje ukuthekelisa idatha kusuka ku-Twitter ukuhlaziya kanye ne-Excel电子表格.
纳粹ezinye izibalo ezilula engiziphumayo ngisebenzisa idatha kusuka Ngaphambi kokuba ugxume ekuhlaziyeni，kufanele uqale wazi ukuthi ufuna ukutholakala yini kudatha.
Ngaphandle komgomo ocacile，idatha yakho ye-twitter ingenye ispredishithi enekholomu nezinhlamvu。 Ngifuna ukwazi：
Ngumuphi usuku lwesonto themilinganiso esingcono sokubandakanya?
左（[@ isikhathi]，10岁）ukuphuma nosuku
文字（E2, "ddd"）ukubuyela ngosuku lweviki
I-5。 Se-benzisa umsebenzi we-Excel if ukuze ukhethe i-standard evamile noma uphendule tweet kukholomu entsha
乌玛i-LEFT（[@ umbhalo we-Tweet]，i-1 = = "@", "冲动", "标准"）
I-6。 Uma unayo yonke idake ilungile，hlaziya idatha yakho usebenzisa ithebula le-pivot noma igrafu ye-pivot
Kusobala ukuthi i-standard ejwayelekile ibonakala kahle uma iqhathaniswa nokuphendula鸣叫.
Ukushicilelwa kusuka kwi-tweet ejwayelekile kufana ne-2x yempendulo yempendulo鸣叫.
Impingulo ye-tweet inginike isilinganiso esingcono sokubandakanya.
Ukuhlela idatha kusemnandi yize kukudla isikhathi sakho。凯蒂（Kepha），富蒂（Nutiya），库蒂卡（kusuka kudatha），富提。 Idatha ekwispredishithi ngokwayo ayisho lutho ngaphandle kokuthi wazi ukuthi yini okufanele uyibheke.
Zama Wena ngokwakho，kunemiyalezo eminingi efihliwe ngaphakathi kwedatha yakho kunalokho ongacabanga.
I-4。 Siyini Isikolo Sakho SE-推特?
Ungahlala amahora ambalwa ngosuku，ukusebenzisana nabalandeli bakho nokubheka i-hashtag。乌加布扎，古巴yini umphumela?
Imiphumela ishintsha kuye ngokuthi yini umgomo wakho。 Ungalinganisa ngokususelwa kwinamba yabalandeli，chofoza isilinganiso，izinombolo zokubhalisa kusuka ku-URL ehlosiwe，njll.
Ucwaningo lubonisa ukuthi imikhiqizo ye-twitter ithola isilinganiso samazwi we-39 ngosuku。 Uyazi ukuthi lelo nani linani?
Kunamathuluzi amaningi atholakalayo ukukala amaphuzu我们-Twitter。 Ngizokwabelana nawe ngamathuluzi akhululekile futhi ongawasebenzisa.
I-Socialert isisombululo esisodwa sokuphela kwezingxoxo ze-Twitter，ukuhlaziywa kwegama elingukhiye，ukulandela i-hashtag，ukuhlonza izihloko ezihamba phambili，nokuningi.
Ithuluzi linesidashibhodi esisebenzayo esingakusiza ukulandelela amagama angukhiye ahambisanayo ngesikhathi sangempela。 Lokhu kungasetshenziselwa ukuxhumana nabalaleli bakho（abangazange bakhulume isibambo sakho）noma bazi ukuthi abancintisana nabo benza kanjani。 Ngaphandle kokuqapha kweBrikhi，ithuluzi lingasetshenziswa futhi ukukhomba abathonya abathintekayo nabachwepheshe abahlobene nesizinda sakho.
I-Followerwonk umkhiqizo owenziwe yiMoz。 Izokunika idatha mayelana nabalandeli bakho-Twitter，indawo利基。 Ukuze usebenzise，kufanele ungene ngemvume usebenzisa i-akhawunti yakho ye-Twitter。 Ikhululekile ukuyisebenzisa.
I-Followerwonk isebenzisa Igunya lomphakathi ukukala ithonya le-Twitter。 Igunya lezenhlalo lilinganiswa ngokususelwa kuma转推。 Ukuze uthuthukise isikolo，kufanele ukhulise ukubandakanyeka kwe-Twitter.
Uma udinga amathuluzi amaningi，Nansi I-6 kumele yazi amathuluzi okuhlaziya我们-Twitter ukuhlola。 Ngokuqaphela indlela umkhiqizo wakho owenza ngayo，ungahlela ukuqondisa kwakho nezinsiza.
Ayikho ifomula elilodwa lokulandelela ikhasi lakho le-Twitter。 Amaphuzu anamandla ahlukile kuzo zonke izigcawu。 Vele unamathele kumetrikhi owodwa诺玛·阿马比利bese uhambisa isikolo sakho phezulu.
Twitter的Uma ungakabi粉丝，hlola phezulu ukusilandela @WHSRnet.
I-Twitter yiyona yesikhulumi esikhulu sezindaba ze-4th esikhulu senhlalo，futhi ngakho ibhizinisi lakho lisebenza kangcono.
我的推特inamathuba okwenza umkhiqizo wakho waziwa futhi ukwandise ukuthengisa kwakho。 Awukwazi ukuhamba kabi nge Abasebenzisi abangu-302 abasebenzayo ngenyanga.
Okusebenza kimi kungase kungakusizi。 Uhlaziya kanjani futhi usebenzise idatha yakho ye-Twitter？ Sitshele ngakho nge-推特!